प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले के सन्देश दिन खोजेको? : शेखर कोइराला :: PahiloPost
प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले के सन्देश दिन खोजेको? : शेखर कोइराला
12th June 2018, 03:20 pm | २९ जेठ २०७५
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेश सभामा गएर सम्बोधन गर्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
शैलजा आचार्यको नवौं स्मृति दिवसमा “शैलजा आचार्य आदर्श समाज” ले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै कोइरालाले भने, 'सातै प्रदेससभामा गएर संबोधन गरेर के सन्देस दिन खोजेको?'
ने क पाका प्रधानमन्त्रीले देशमा बहुमतको आडमा अधिनायकवाद लद्न यस्तो क्रियाकलाप गरेको हुनसक्ने आरोपसमेत लगाए। कार्यक्रममा कोईरालाले मुलुक निरंकुशता तर्फ अगाडी बढेकाले लोकतन्त्र र संघीयता धरापमा पर्न सक्ने खतरा रहेको उल्लेख गरे। उनले कार्यकारी राष्ट्रपति काँग्रेसका लागि स्वीकार्य नहुनेसमेत बताए। भने, 'बहुमत तपाँईहरुसँग छ, सरकार जसरी चलाउँन मन लाग्छ चलाउँनोस तर दुईतिहाई बलको आडमा मुलुकको शासन ब्यवस्था नै परिवर्तन गर्न लाग्ने हो त्यसका बिरुद्ध कांग्रेस जस्तोसुकै आँधीबेहरी ल्याउन तयार छ।'
कोइरालाले आफ्नै पार्टीले पनि संसदमा सशक्त भूमिका निभाउन नसक्दा सरकार पक्षलाई सजिलो भइरहेको आरोप लगाए। बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिदै गर्दा संसदमा त्यस बिषयमा प्रभावकारी ढंगले कुरा नराखेर कांग्रेसले गल्ती गरेको कोइरालाको दाबी थियो।
गुट-उपगुटमा रुमल्लिरहेको फाईदा सरकारले लिईरहेकोले मुलुक अधिनायकबादमा जाने खतरा बढेको संकेत देखिएको कोइरालाको धारणा थियो।
प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले के सन्देश दिन खोजेको? : शेखर कोइराला को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।